बाबा आज म तपाइलाई चिक्न सिकाउँछु ......... - Indian Girls Nude XXX Images
बाबा आज म तपाइलाई चिक्न सिकाउँछु ………
मेरो नाम रोजि हो। म अहिले २६ बर्षकी भएँ। कुरा २ बर्ष पहिलेको हो जब म २४ बर्षकी थिएँ। म गोरी, मोट्ठी अनि अग्ली पनि थिएँ। मेरो दुध मम्मीक जत्रै-जत्रै(३६) थिए। मेरो बाबा(४२ बर्ष), मम्मी(४० बर्ष) र भाइ(१८ बर्ष) हङ्कङ बस्नुहुन्थ्यो। म बाजे(७२ बर्ष) र बज्यै(६८ बर्ष) सित नेपालमै बस्थेँ। म डिग्रीमा पढ्दै थिएँ। म होस्टेल बस्ने हुनाले बिदाको बेला मात्र घर आउँथे। १६ बर्षमा बाजेसँग चिकेको कथा त पढिसक्नु भयो। अब कसरी मैले आफ्नै बाबालाई चिक्न सिकाएँ त्यो भन्दै छु।
म: नचिक्दै २ पटक झर्न लागीसक्यो …. अहिले पनि झर्यो भने फेरी ठन्किन्छ त?
बाबा: अब त ५ – ६ घण्टा सम्म ठन्किँदैन।
मैले हातले भित्तामा आड लगाएर यौटा खुट्टा बाबाको काँधमा चढाएँ। पेन्टी लगाएकीथिइन स्कर्ट फर्किहाल्यो पुती देखेर बाउ त पागल भयो। झ्याप लाडो पुतीमा छिराएर बेस्करी चिक्नथाल्यो। मैले गाली गरेँ “थुक्क मुजी! कति आत्तिएको? म भागेर जान्छु र? बिस्तारै हान्न। झर्नलाग्यो भने एकछिन रोक्ने अनि फेरी बिस्तारै चिक्ने गर्नुपर्छ के।” (मैले त जोसमा बाउलाइ पनि तँ भनेछु। चिक्न पाएर होला बाउलाई मतलब थिएन) बाउले पनि मैले भनेझैँ रोकिँदै चिक्दै गर्न थाल्यो। २० मिनेट पछि मेरो पनि पुतीमा पानीको मुल फुट्लाझैँ भयो। बाबा: रोजी! अब त म रोक्न सक्दिन यार। अब झारे हुन्न?
बाबा: छोरी नै रण्डी भएपछि के गर्ने त? बुडीले छोडेर चिक्न नपाएको बेला तँ घरि दुध देखाउँछेस् त घरि पुती देखाउँछेस्। सिमाचिक्नि तेरो पुति देखेको दिनदेखी त मैले तँ मेरो छोरी होस् भन्ने कुरै बिर्सिसकेको थिएँ। कहिले चिकम् जस्तो पो भाकोथियो यार। तँ रण्डी पनि कम छैनस्। आफ्नै बाउलाई पुती देखाएर गिज्याउछेस्। बाउले ल्वाम् ल्वाम् चिक्दै थियो। म मजा मानेर अँ…. अँ…. अँ…. आ….. आ….. आ….. आ….. गर्दै थिएँ। बाउले पनि आ….. रोजि! भन्दै पुरै ८” को लाडो पुतीमा छिराको थियो। एक्कासी मेरो पुतीबाट पानीको मुलै फुटेझैँ पुतीरस बग्न थाल्यो। बाउले आत्तिएर लाडो पुतीबाट झिकेर के मेरो मुखमा हालेकोथीयो मोटरले भन्दा जोडले फुसी मेरो मुखमा फाल्यो।फुसी मुखमै खेलाउँदै मैले बाबालाइ मेरो पुती चाटेर पुतीरस मुखमा खेलाउन भने। त्यसपछि बाउलाई फ्रेन्च किस गरेँ। भित्रै- भित्रै लाडोरस र पुतीरस घोलेर दुबैले खाएम। बाउ त लास्टै सिथिल भएछ ओछ्यान मा लड्यो। म बाउमाथि सुतेँ। म: बाबा कस्तो लाग्यो त?
त्यसपछि हामी दुवैजना नाङ्गै सँगै सुत्यौँ। १ महिना सम्म मैले बाबालाई ट्रेनिङ्ग दिएँ। चिनेका अन्टीहरु र मेरा केही साथीहरु सँग पनि बाबालाई सेटिङ मिलाइदिए
← नितम्ब स्पर्स गर्दा स्वर्गनै पुगेको अनुभुती भयो	रश्मी दिदिलाई चिक्द मज्ज आएको थियो →